Kulan looga hadlayey doorka Haweenka ee kaga aadan u adeegidda Bulshada ayaa lagu qabtay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Kulan looga hadlayey doorka Haweenka ee kaga aadan u adeegidda Bulshada ayaa...
Kulan looga hadlayey doorka Haweenka ee kaga aadan u adeegidda Bulshada ayaa lagu qabtay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug+(SAWIRRO).
Kulanka oo ahaa mid wadatashi ah oo looga hadlayay sidii haweenka gobolka Mudug ay u sameey lahaayeen qorshayaal isku tashi ah oo ay ku xoojinayaan kaalinta haweenku ay ku leeyihiin u adeegida bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo, waxaana kulanka soo agaasimay xafiiska wasaaradda haweenka ee Galmudug.
Kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay ku dhowaad 300 oo haween ah kuwaas oo ka kala yimid deegaano ka tirsan gobolka Mudug.
Isku duwaha gobolka Mudug ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Galmudug Drs, Yurub Cabdulqaadir Sheekh Cali ayaa madasha wada-tashiga ah ka sheegtay in xafiiska wasaaradda haweenka gobolku uu ku dadaali doono wax ka qabashada baahiyaha haweenka iyo u adeegida bulshada, iyadoo dhanka kalana ugu baaqday haweenka gobalka Mudug la shaqeynta maamulada dagmooyinka iyo gobalka Mudug.
Sidoo kale kulanka wadatashiga waxaa hadallo ka jeediyay qaar ka mida xubnaha ururada haweenka gobalka, kuwaas oo sheegay in ay kaalintooda ka qaadan doonaan u adeegida bulshada.
Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Galmudug Ubax Xuseen Dhiblaawe ayaa uga mahad celisay haweenka gobolka Mudug iyo isku duwaha cusub ee wasaarada Drs Yurub Cabdulaadir sheekh cali dadaalka ay wadaan iyadoo sheegtay in ay garab taagantahay ayna qeyb weyn ka qaadan doonto horumarinta haweenka.
Previous articleDoorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo lagu wado in ay goordhow ka billaabato Magaalada Jowhar.
Next articleWasiirka Gaashaandhigga XFS iyo Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo ka wada-hadlay iskaashiga labada dhinac.